FAMPAHALALANA SY SARY MITERAKA ALIKA TORNJAK - ALIKA
Fampahalalana sy sary miteraka alika Tornjak
Fido ilay Tornjak feno taona
husky malamute alemanina mpiandry mix
Sheepdog Bosnian-Herzegovinian - Tornjak
Alika Kroaty Planinac
Alika Mountain Mountain
Alika lehibe sy mahery ny Tornjak, mifandanja tsara ary mailaka. Ny bikan'ny vatana dia efa ho toradroa. Tsy maivana ny taolana, nefa tsy mavesatra na maditra. Lava sy matevina ny palitaony. Ny vatan'ity alika ity dia matanjaka sy voaorina tsara, miaraka amina hetsika mirindra sy mihaja. Lava sy matevina ny volo ary miaro tsara ny vatana amin'ny toetr'andro ratsy. Maloka ny rambony, tazonina ho avo toy ny sainam-pirenena. Ny Tornjak dia manana endrika mazava, matoky tena, matotra ary milamina. Amin'ny ankapobeny, ny Tornjak dia alika mitafy lava lava volo fohy amin'ny tarehy sy tongotra. Ny akanjo ambony dia lava, matevina, marokoroko ary mahitsy. Izy io dia lava indrindra eo amin'ny tapany ambony amin'ny croup, eo ambonin'ny soroka sy ny lamosina dia mety somary mikotrana. Eo amin'ny molotra sy ny handrina, hatramin'ny tsipika an-tsary mampifandray ny sofina, ambonin'ny sofina ary amin'ny faritra aloha amin'ny tongotra sy tongotra dia fohy izany. Izy io dia be dia be indrindra manodidina ny hatoka (mane), matevina ary lava mihoatra ny feny ambony (totohondry). Izy io dia mamorona volom-borona manaraka ny sorony. Miaraka amin'ny alika mifono tsara dia be koa izy io ao aorian'ny faran'ny aoriana. Ny rambony dia feno volo lava be. Ny akanjo ririnina dia lava sy matevina ary volon'ondry tsara tarehy. Ny volo dia matevina sy matevina ary tsy tokony hisaraka amin'ny lamosina. Toy ny fitsipika ny Tornjak dia miloko parti miaraka amin'ny marika misy loko matevina isan-karazany. Matetika fotsy ny lokon'ny tany manjaka. Mety misy alika misy akanjo mainty ary misy marika fotsy izay matetika hita manodidina ny hatoka, eo an-doha sy amin'ny tongotra. Mety misy alika fotsy saika fotsy ihany koa misy marika kely.
Ny Tornjak dia ampiasaina amin'ny fiompiana sy fiarovana ny biby fiompy alika mpiambina farmyard. Manana toetra milamina izy. Sariaka izy, tony, be herim-po, mpankatò, manan-tsaina, feno fahamendrehana sy fatokisan-tena. Rehefa miasa izy dia masiaka amin'ny fiambenana fananana nankinina taminy, tsy azo tsolotra ary mampiahiahy olon-tsy fantatra. Hiaro ny tompony sy ny omby ary ny fananany amin'ny fiainany manontolo izy. Sariaka amin'ny olona fantany ny Tornjak. Natokana ho an'ny tompony izy ary tena nifangaro tamin'ny fanatrehany, dia be fitiavana amin'ny olona monina amin'ny manodidina azy akaiky izy. Mianatra haingana ary tsy manadino zavatra mora foana, faly manao ireo asa nanendrena azy. Matanjaka sy mafy, mandritra ny ririnina mangatsiaka, mandry amin'ny tany ireo alika ireo matetika ary rakotry ny lanezy. Mora mampiofana izy. tanjony amin'ny fampiofanana an'io alika io hahatratra ny toeran'ny mpitarika pack . Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa miara-miaina amin'ny alika isika olombelona dia lasa fonosin'izy ireo isika. Ny fonosana iray manontolo dia miasa ao ambanin'ny tsipika mpitarika tokana ary voafaritra mazava tsara. Ianao sy ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Izay no fomba tokana hahombiazan ny fifandraisanareo.
Lanja: Lehilahy 25 - 27 santimetatra (65 - 70 cm) Vehivavy 23 - 25 santimetatra (60 - 65 cm)
Karazana matanjaka tsara
Ny Tornjak dia tsy atolotra ho an'ny fiainana an-trano. Mila toerana izy ireo ary hanao tsara indrindra amin'ny tokontany malalaka farafaharatsiny. Satria miaro azy tsara ny palitaony matevina, dia afaka miatrika am-pifaliana ny fiainana any ivelany izy io, raha manana fialofana mety.
Ity karazana alika ity dia mifanaraka amin'ny fianakaviana misy toerana malalaka manodidina ny trano. Mila raisina a mandeha isan'andro .
sary alika pitbull terrier amerikana
12 ka hatramin'ny 14 taona eo ho eo
Borosio ary borosy amin'ny borosy mafy volo, ary mandro raha tsy ilaina. Ny shampoo dia mety manala ny palitaon'ny fananana misy menaka tsy mahazaka rano, ka mampiasa savony malefaka. Roa isan-taona ity karazana ity.
Ny Tornjak dia niainga avy tany amin'ny faritr'i Bosnia, Herzegovina ary Kroasia ary efa nisy tao amin'ireo faritra ireo tao anatin'ny arivo taona lasa. Ny Tornjak dia voasoratra anarana amin'ny anarana Kanis montanus izay adika amin'ny alika an-tendrombohitra, fa ny mponina ao an-toerana dia nanome azy ny anarana hoe Tornjak (tor: vala ho an'ny ondry sy omby). Ny Tornjak dia voasoratra anarana ho karazana autochthonous tamin'ny 9 Mey 1981 miaraka amin'ny anarana 'Bosnian-Herzegovinian sheepdog - Tornjak.' Araka ny fikarohana, ny Tornjak dia azo inoana fa taranaky ny Tibetan Mastiff na avy amin'ny toerana misy an'i Iran ankehitriny. Ny tontolo iainana dia namorona alika salama sy matanjaka, manana filàna maotina kely ho an'ny sakafo sy fialofana ary mpiambina tsara.
mifangaro mpiady mpiady sy ady totohondry
Mikorisa ny alika kely Tornjak amin'ny faha-7 taonany miaraka amin'i Pickle, Tornjak olon-dehibe amin'ny 5 taona— 'Nantsoinay hoe Pickle izy satria teraka tany Mt. Vlasic any Bosnia. Tornjaks vitsivitsy fotsiny izy ireo any Etazonia ”.
Laboratoara mavo 3 volana
Alaivo toy ny alika alika ny Tornjak
maso manga aostraliana kely indrindra
cavalier king charles spaniel alemania mpiandry mix